မကောင်းသတင်း တွေကြောင့် အနုပညာလောကကနေအပြီးတိုင် အနားယူခဲ့ရတဲ့Idol (၅) ဦး | News Bar Myanmar
မကောင်းသတင်း တွေကြောင့် အနုပညာလောကကနေအပြီးတိုင် အနားယူခဲ့ရတဲ့Idol (၅) ဦး
နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်မကောင်းသတင်းထွက်လာပြီဆိုရင် ပုံမှန်အားဖြင့် အနုပညာလောကက ခေတ္တအနားယူသွားကြလေ့ရှိပါတယ်။ လူထုကလည်း ချီးမွမ်း ၇ ရက် ကဲ့ရဲ့ ၇ ရက်ဆိုသလို ကြာတော့လည်းမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားတာကများပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိစ္စတိုင်းကတော့ဒီလောက်မချောမွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ယခုဖော်ပြပေးသွားမယ့် idol တွေက​တော့ မကောင်းသတင်း တွေကြောင့် အနုပညာလောကကနေအပြီးတိုင် အနားယူဖို့တွန်းအားပေးခံခဲ့ရသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Seungri (former member of BIGBANG)
၂၀၁၉ ခုနှစ်တုန်းက Seungri အပါအဝင် ယောကျ်ားလေး idol အချို့ပါဝင်တယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့ Burning Sun Club ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံက သတင်းခေါင်ကြီးပိုင်းတော်တော်များများမှာနေရာယူခဲ့ပြီး လူငယ်ပရိတ်သတ်နဲ့ ကိုရီးယားလူထုကြားမှာလည်း Burning Sun ကိစ္စက ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအမှုမှာ Seungri ကတရားမဝင် vidoe တွေကိုအခြားယောက်ျားလေး idol တွေပါတဲ့ group chat ထဲမှာဖြန့်ဝေခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စပြီးနောက်လအနည်းငယ်အကြာမှာ Seungri ကပရိတ်သတ်တွေနဲ့ လူထုကို တောင်းပန်စာအရှည်ကြီးနဲ့ အတူအနုပညာလောကကအနားယူတော့မယ့်အကြောင်း အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
၂။ Jang Mi In Ae
မင်းသမီးဟောင်း Jang Mi In Ae ကတော့ သမ္မတ Moon Jae ရဲ့အယူအဆတစ်ခုကို မထောက်ခံကြောင်း post တင်ခဲ့ရာက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဝင်ငွေမကောင်းတဲ့မိသားစုတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တာကြောင့် ကိုရီးယားပြည်သူတွေ အပြစ်တင်မယ်ဆိုလည်း မမှာပါဘူးနော်။
Jang Mi In Ae ကဒီလိုငွေအမြောက်အမြားကို ဒီလိုနေရာမှာမသုံးသင့်ကြောင်းပြောခဲ့တာပါ။ နောက်တော့ သူမရဲ့စေတနာကို ကိုရီးယားပြည်သူတွေနားမလည်တာ ဝမ်းနည်းမိကြောင်းပြောပြီး သူမကို မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ အနားယူတော့မယ့်အကြောင်းတစ်ခါတည်း အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
၃။ Jimin (former member of AOA)
Jimin အကြောင်းကတော့ လတ်တလောဖြစ်ပျက်ခဲ့တာမို့ အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာ ပူပူနွေးနွေးရှိဦးမှာပါ။ သူမက FNC Entertainment မှာအတူရှိနေတုန်းက အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Mina ကိုဖိနှိပ်ဆက်ခံမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး Mina ကလူထုကိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ ဒီနောက်ပိုင်းတော့ Jimin အနေနဲ့ AOA အဖွဲ့ထဲကထွက်ပြီး အနုပညာလောကကပါ အနားယူတော့မယ့်အကြောင်း သူမရဲ့ အေဂျင်စီကနေတစ်ဆင့် အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
၄။ Choi Jong Hoon (former member of F.T. Island)
၂၀၁၉ ခုနှစ်ထဲမှာပဲ F.T. Island member ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Choi Jong Hoon ကမိန်းကလေးတွေရဲ့ ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို ကာယကံရှင်မသိအောင်ရိုက်ကူးပြီး တခြား Celebrities တွေပါဝင်တဲ့ group chat တွေတဲ့ဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံအဝှမ်းကမိန်းကလေးတွေကိုလည်း သူမတို့ မူးနေတဲ့အချိန် အလိုမတူပဲမတရားပြုကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုးဆိုးရွားရွားသတင်းတွေကြောင့် Choi Jong Hoon အနေနဲ့အဖွဲ့ထဲကလည်းထွက်ပြီး entertainment industry ကပါအနားယူခဲ့ရပါတယ်။
၅။ Yang Hyun Suk
YG ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Yang Hyun Suk ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ B.I ရဲ့ Drug Scandal နဲ့ပက်သတ်တဲ့ ကိစ္စအချို့ကြောင့် အနုပညာလောက ကနေအနားယူခဲ့ပါတယ်။
တောင်ပန်စာလည်းရေးသားခဲ့ပြီး စာထဲမှာ သု့ဘဝရဲ့ ၂၃ နှစ်ကို YG ကိုထူထောင်ဖို့အတွက်နှစ်မြှုပ်ထားခဲ့ပြီး YG ကအကောင်းဆုံး artist တွေထွက်ရှိလာဖို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာအကြီးမားဆုံးပျော်ရွင်မှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ သူကြောင်နဲ့တခြားသူတွေပါထိခိုက်လာမှာစိုးလို့ ဒီလိုအနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာ အမှန်တရားပေါ်လာမှာယုံကြည်ကြောင်း ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
Next အကြိုက်ဆုံး Marvel Hero တွေကို ကိုယ်စီပြောပြလိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း KPoP အဖွဲ့ BTS »
Previous « ၂၀၂ဝ နှစ်ဝက်အတွက် တောင်ကိုရီးယား၏ ထိပ်တန်းကြော်ငြာမင်းသား (၃) ဦး